Maxkamad lasoo taagay wiil Soomaali ah oo 3 ruux dilay | KEYDMEDIA ONLINE
Maxkamad lasoo taagay wiil Soomaali ah oo 3 ruux dilay
Wiil Soomaali ah ayaa weerar ku qaaday dumar ku sugnaa hoyga uu dagganaa, waxa uuna dilay saddex ruux iyadoo maanta lasoo taagay Maxkamad
MUQDISHO, Soomaaliya - Maxkamad ayaa lasoo taagay wiilkii Soomaaliga ahaa ee Jimcihii ina dhaafay weeraray dad shacab ahaa kuwaasoo saddex kamida uu dilay halka lix kalena uu dhaawacay kaddib markii uu ku weeraray toorey.
Dhammaan dadkii uu dilay wiilka Soomaaliga ah ee gaarayay saddexda ruux waxay ahaayeen dumar, falkan oo ka dhacay magaalada Würzburg ee dalka Jarmalka waxaa maanta loo soo maxkamadeeyay wiil Soomaali ah sida ay booliisku sheegeen.
Ninkan oo da'diisa lagu sheegay inuu yahay 24 sano jir ayaa toorrey uu ka soo qaatay guriga uu degganaa, isla markaana uu dhowr qof oo gudaha dhismahaas ku jirtay weeraray. kaddibna dadkii dibadda ku sugnaa ayuu beegsaday. Shan haween iyo hal cunug ayuu dhaawacay wiilkan oo ay sheegeen ciidamada boolisku in uu dhimirka la'aa ayna macquul tahay in xaaladdiisu aysan wanaagsaneen xilliga uu falkan geysanayay.
Maxkamad ayaa la soo taagay isagoo loo haysto inuu dilay saddex ruux, sidoo kalena lix qof oo kale oo isku day dil ah ayaa lagu soo oogay, maxkamadda ayaa dhageysatay dacwadda loo haysto eedeysanaha, inkastoo sida la sheegay uu ahaa qof dhimirka looga jiro muddo dhoor maalin ahna uu isbitaal ku jiray xaalad caafimaad darro awgeed, haddana falkan markii uu dhacay Jimcihii ciidamada Boolisku way xireen kaddib markii ay bowdada kaga dhufteen xabbad.
Intii aan la xirin ayuu mindida ku dhuftay saddex ruux oo goobta ku geeriyootay, sidoo kalena waxa uu dhaawacay lix ruux oo kale oo mid kamida uu yahay caruur, wuxuuna isku dayay inuu weeraro dad kale oo iyagana ku sugnaa goobta uu falku ka dhacay, hayeeshee dad shacab ah oo iska caabin sameynayay iyo ciidanka Booliska oo iskaashanaya ayaa ugu dambeyn ku guuleystay in ay dhulka dhigaan isagoo dhaawac ah lagana qaado mindidii uu dadka ku laayay.